Afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal ka adkaaday Norwich City ee Premier League – Gool FM
Afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal ka adkaaday Norwich City ee Premier League
(London) 01 Maajo 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 1-0 ku martay Norwich City oo kulan ka tirsan horyaalka Premier League ay ku soo dhawaysay garoonkeeda Emirates.
Geesiga kooxda Gunners ee kulankan waxa uu ahaa Danny Welbeck kaasoo goolka guusha u horseeday kooxdiisa, markii daqiiqaddii 59-aad uu dhaliyey goolka qura oo ay guusha ku qaateen, isagoo ka soo kacay kursiga keydka.
>- Arsenal ayaa ku guuldarreysay inay qeybta hore ee ciyaarta sameyso hal shuut oo bartilmaameed toos ah markii shanaad xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, dhammaan shantaas kulan ayeyna Gunners ku ciyaaraysay garoonkeeda.
>- Norwich City waa kooxda ugu shabaq ilaasashada xun horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana ay shabaqeeda gool ka ilaashatay shan jeer oo qura, iyadoo la siman kooxdaAston Villa, si kale haddii aan u dhigno Norwich City iyo Aston Villa waa labada kooxood ee tirada ugu yar shabaqooda gool ka ilaashaday xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waana min shan jeer.
>- Arsenal ayaa saddex kulan oo xiriir ah shabaqeeda gool ka ilaashatay Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii September sanadkii 2015.
>- Danny Welbeck ayaa dhaliyey shuutkii ugu horreeyey ee bartilmaameed toos ah oo ay Arsenal ka sameysay kulankan ay ka horjeeday Norwich.
Lix waxyaabood oo laga bartay guushii ay Real Madrid ka gaartay Real Sociedad… (Muxuu ka dhignaa madaxii Bale?)
“Barcelona kuma tiirsanaan doonto gafafka Atletico iyo Real Madrid,” Luis Enrique